चीनबाट छात्रवृत्तिको ४२ कोटा तर तीनजना मात्र सिफारिस
भवानीश्वर गौतम काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ३ सोमबार ०६:४६:००
सरकारी चिकित्सकबाट मात्रै आवेदन माग्दा चीनले दिएको ३९ कोटा गुम्ने सम्भावना
भवानीश्वर गौतम, काठमाडौं
चीन सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी/एमएस) अध्ययनका लागि ४२ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । तर, तीनजनाको मात्र नाम सिफारिस भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक एकीकृत परीक्षा लिएर छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले सरकारी चिकित्सकबाट मात्रै आवेदन माग्दा ३९ कोटा गुम्ने जोखिम देखिएको हो । जसकारण सरकारी चिकित्सकको कोटा खाली हुने, तर खुलाबाट अवसर नपाउने समस्या देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान नपुर्‍याउँदा छात्रवृत्तिकै कोटामा समेत नेपालीले पढ्न नपाउने भएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कानुनी व्यवस्थाका कारण ४२ जनाको कोटामा तीनजनाको मात्र नाम सिफारिस भएको बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने व्यवस्था भएकाले छात्रवृत्तिको कोटामा कम सिफारिस भएका हुन्,’ उनले भने ।
चीनले उपलब्ध गराएको ४२ छात्रवृत्ति कोटामा जम्मा २७ जनाले मात्र फारम भरेका थिए । तीमध्ये २४ जनाले नेपालमै अध्ययनका लागि नाम निकालेकाले तीनजना मात्र सिफारिस भएको उपाध्यक्ष गिरीले बताए । नेपालमा अध्ययनको अवसर पाएकाहरूले चीन जान नचाहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन गर्न एकजनाका लागि २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । निःशुल्क अध्ययन, खान बस्नका लागि समेत खर्च दिने गरेको चीनमा अध्ययन गर्ने धेरैको अवसर गुमेको छ । एमडी/एमएस अध्ययनका लागि सात हजार आठ सयले परीक्षा दिएकोमा तीन हजार उत्तीर्ण भएका थिए ।
पाएको कोटा गुम्ने भएपछि विकल्पमा छलफल
चीन सरकारले दिने छात्रवृत्ति कोटा गुम्ने भएपछि विकल्पमा छलफल भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले कानुनको कुनै आधारलाई टेकेर भए पनि छात्रवृत्ति कोटा गुम्न नदिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । चीनले दिएको ३९ छात्रवृत्ति कोटामा शिक्षा मन्त्रालयले ४२ एमडी/एमएस र बाँकी सात सिट पिएचडीका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ४२ जनाका लागि सरकारी चिकित्सक माग गरेको थियो । खुला माग नगरी सरकारी चिकित्सकबाट मात्र तोक्दा अहिले समस्या भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् ‘सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने भन्ने व्यवस्था भएकाले छात्रवृत्तिको कोटामा कम सिफारिस भएका हुन् ।
सरकारीमा चिकित्सकलाई फालाफाल, अरूलाई अवसर नै मिलेन
सरकारी चिकित्सकलाई नेपाल तथा विदेशमा अध्ययन गर्न प्रशस्त कोटा भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले अवसर पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । गत १८, १९ र २० पुसमा आयोगले एमडी–एमएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कुल सात हजार आठ सय विद्यार्थीले फारम भरेका थिए ।
आयोगले विभिन्न विषयमा १६ सय सिट निर्धारण गरेको छ । कुल १६ सय सिटमध्ये ६ सय बढी नेपाल सरकारले पाएको छ । दुई सय २६ जनाले मात्रै सरकारी कोटामा फारम भरेकोमा दुई सयजना मात्रै पास भएका छन् । चार सय सिट अझै खाली छन् ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारी चिकित्सकलाई दिएको ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट फालाफाल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थीले चाहेअनुसारको विषय पढ्न सरकारीमा सिट कम भएकाले अधिकांशको रोजाइ निजी कलेजतर्फ हुँदा सरकारी सिट खाली हुन पुगेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको नियमले सरकारी चिकित्सक निजी मेडिकल कलेजमा पनि पढ्न जाने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई टेकेर सरकारी चिकित्सकले चाहेअनुसार पढ्ने भन्दै निजीमा गएका छन् । यता, खुलातर्फबाट आएका करार, ज्यालादारी चिकित्सकले भने सरकारी सिट ओगटेका छन् ।
निजी र सरकारीमा दुवैतर्फ खुला ५०, सरकारी ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारी शिक्षण संस्थाको हकमा मात्रै लागू हुने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क र निजीमा पैसा तिरेर पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आठ जिल्लाका सिडिओ हेरफेर, अध्यागमन विभागमा भट्टराई
सुकुम्बासीको बिजोग : खुला आकाशमुनि सामूहिक वास, छिमेकीको सहयोगले खानपिन
राजा महेन्द्रले ०१३ सालमा शिलान्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो, ६४ वर्षमा पनि बनेन ९० किलोमिटर सडक
सिन्धुपाल्चोक प्रेस युनियनको २५ वर्षे एकाधिकार तोड्दै वामपन्थी प्यानल विजयी